Izinto To Do On Long Qeqesha Uhamba | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Izinto To Do On Long Qeqesha Uhamba
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 19/02/2021)
A train ride onegunya ukunyanzela ukuba ume, kondela ngefestile kunye nokwazisa akanaso yokuthatha ixesha lethu. sihamba kumnandi kodwa ngamanye amaxesha zingathathela bonke amandla ethu, i uhambo olude ithuba ukucima kamnandi uze uzive uhlazi-. Yenza kangangoko uhambo lwakho - apha izinto zethu phezulu ukwenza kuhambo olude ukuqinisekisa umhambi zonke ukukhwela lokuphumla mnandi.
Mamela umculo ngexesha uthatha uhambo olude
Nxiba headphones zakho wehlise ngoxa uphulaphule umculo owuthandayo. Akukho ndlela engcono ukonwabela ubuhle ubangel. Khululeka uze ubukele ezintle landscape rush edlulileyo uliphulaphule amagcisa zakho ozithandayo.
Funda ulwimi olutsha
Kutheni ungakhe ube neempawu entsha uhambo lwakho? Ukuba uhambela ilizwe othetha ulwimi olwahlukileyo, uhambo olude inika ithuba makathathe amagama ambalwa kunye namabinzana.
Kulungile ukuba bazazi iziseko naluphi na ulwimi xa usiya kwilizwe langaphandle. Ngethamsanqa, nazi zokusebenza Podcasts unako download nezinika izifundo kubandakanya ethandwa Spanish, IsiJamani, IsiTaliyani, kanye iilwimi IsiNgesi.
Ukufunda mkhulu ngokuba kuphumza ingqondo kwaye usoloko indlela emnandi kudlule ixesha. Long iiyure zomsebenzi kunye nobomi ephithizelayo kuthetha ixesha lokufunda, ngoko uhambo olude ikwamele ithuba ukutsiba kwi incwadi yakho okanye eBook. Ukuba uziva wonqena kwaye ufuna umntu ukwenza ukufunda kuwe, womsindo-incwadi enye enkulu.
nge laptops, iPads, kanye Smartphones onawo, kulula ukufumana zokuzonwabisa eyayifakwe. Ukubamba up on yakho series kamabonakude uyithandayo okanye ukubukela loo movie ziye oyilangazelelayo ukubukela.
Nokuba kukho WiFi ekhoyo okanye, ingumbono omhle ukukhuphela nayiphi show okanye movie oceba ukubukela phambi uhambo lwakho. Ukubamba up on-omthandayo kakhulu amabali akho kwi-screen kwaye phambi kokuba uyazi ukuba, uya kuba lapho uya.
Kulula ukuba uzive udiniwe nelidangeleyo ngexesha uhambo olude. Emva ehleli uloliwe iiyure, kubalulekile ukuba wolule imilenze yakho xa kunokwenzeka. A uhamba elifutshane enkantini kuya kukunceda ukuba usebenzise ixesha kunye ukuze sizive agcwalisiwe. Ukuhamba ngenqwelwana ukuya kwi sidliwe, Jonga kwi imbonakalo-mhlaba kwaye sibe ezinye izimuncumuncu kunye isiselo yakho oyikhethileyo
Mazize abantu abatsha kuhambo olude
Ukuhamba ngololiwe ingaba ulwazi loluntu. Ukudibana nabantu abatsha koololiwe kulula ngaphezu kwezinye iindlela izithuthi. Ngokungafaniyo indiza, ukuba inkululeko ukuhambahamba kwaye zizibandakanye nabanye abahambi. Kuyinto umdla into sinokukufunda kwabanye abantu amabali – sithethe ngobomi, umsebenzi, kwaye ukhulise inethiwekhi yakho. Ask the person next to you about the book they’re reading, banike iswiti, okanye umane uqalisa incoko malunga indawo ekuyiwa kuyo ke ukuba uhambela. It liyadlula iincoko unayo lo gama abahamba Europe ngu loliwe oko kudala iinkumbulo njalo.
Lungisa for uhambo lwakho olulandelayo olude
I uhambo olude na ngamanye amaxesha ngamaxesha kuphela ezizolileyo ngexesha lakho uhambo. Kunokuba ithuba kwamnandi ukuba imane nokulungiselela indawo ozikhethileyo. Basele plenty amanzi, yitya ukutya, kwaye ukuba kunokwenzeka, ubuthongo. Ukusebenzisa ngobulumko uhambo lwakho Uloliwe olude kuya kukunceda ukuba uzive sihlaziyekile akukhuthalele - ilungele indawo yakho elandelayo.
Yintoni na kuhambo olude? Sazise ngokukhetha tweeting unathi @SaveATrain! , Ungafumana amanye amajelo ethu kwezentlalo Saveatrain
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthings-long-train-journeys%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)